Kedu otu esi enweta ogo ogo search engine na njikarịcha?
Nyocha njirimara ọchụchọ (ma ọ bụ SEO) bụ akụkụ dị mkpa nke usoro atụmatụ azụmahịa. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye ọnọdụ ọchụchọ gị, mgbe ahụ ị ga-atụle SEO. Taa, m ga-ekekọrịta ndụmọdụ kasị mma SEO maka ogo dị elu na Google - heating monitoring systems.
Ọdịnaya Pụrụ Iche bụ
Lekwasị anya n'ịmepụta ọdịnaya na mbido. Tupu ịdepụta isiokwu ma ọ bụ blog posts, jide n'aka na ha bụ ihe ọmụma, na-akpali akpali, ma dị mkpa. Ọdịnaya ị jupụtara na saịtị gị ga-abara ndị na-agụ gị uru. Mee ederede nke ndị ọrụ nwere ike ịkekọrịta. Cheta, ihe dị elu ma na-efe efe bụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma. Bụrụ ya isiokwu, akwụkwọ ọgụgụ, akwụkwọ ọcha, nchọpụta ọmụmụ, vidiyo - jide n'aka na ha dị mma ma nyere aka. Ọ bụrụ na ọ naghị adị gị ka ịdekọ posts na mgbe niile, tụlee ịbanye ọrụ ụlọ ọrụ SEO dị ka Semalt .
Ngalaba na-emepe kachasị elu
Dịka ọnụ ọgụgụ si kwuo, njikarịcha na saịtị na-eme ka 80% nke mkpọsa SEO na-aga nke ọma. Mgbe ị nọgidere na-ebipụta na-etinye ọdịnaya, ị na-akpọ ndị ọzọ na-akpaghị aka ka ha jikọta na saịtị gị. Ọ bụ ya mere ụlọ njikọ njikọ kwesịrị ịbụ ihe kachasị mkpa gị.
Taa, ihe ka ọtụtụ ndị ọkachamara SEO na-ewere njikarịcha na peeji nke kachasị mkpa iji nyere ụlọ ọrụ aka aka inweta ọkwa dị elu na Google. Backlinks bụ ike na-akwọ ụgbọala na nke a. Ejikọta njikọ ụlọ bụ mkpụrụ nke ọdịnaya dị mkpa ị na-emepụta. Ya mere, ị kwesịrị iji ya kpọrọ ihe.
Mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma
weebụsaịtị mara mma bụ ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa. Enweghị ịgọnahụ na saịtị ga-eme ka ndị ọbịa karịa ndị na-agwụ ike. Chee echiche banyere ihe nwere ike ime ka mkpokọta weebụ gị mara mma: àgwà ndị dị mma, elu-mma foto na ndịna-emeputa, ndokwa na-adọrọ adọrọ na akara na-aga n'ihu. Cheta, ebe dị mma ịchọta dị mkpa iji weghata na ilebara ndị ahịa anya. Nchịkọta weebụ bụ na ihe na-emepụta echiche na-adịgide adịgide. Dika ha na ekwu, ihe mbu bu ihe nile.
O kwesịkwara ịkọwa na Google na-echefu na ntinye aka nke akụ dịka ọkwa dị oke mkpa.Mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mfe iji. Ọzọkwa, na-ebuli ya maka ngwa abụọ na ngwaọrụ desktọọpụ.
Meziwanye Njikọ Mgbasa Ozi Gị
N'ihi na n'afọ 2017 ọtụtụ n'ime okporo ụzọ na-eme site na netwọk mmekọrịta, ọ dị oké mkpa ka e wee nweta azụmahịa gị na nchịkọta mgbasa ozi ọha mmadụ.Eziokwu bụ na n'ụbọchị ndị a, ọ dị njọ karịa mgbe ọ bụla iji usoro ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi na-achụpụ okporo ụzọ na ndị fanyere aha gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.Dịka mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta ebe nrụọrụ weebụ, ọ na-atụ aro na ị nwere usoro mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ụlọ ọrụ ọchụchọ na-atụle ọtụtụ ihe tupu inye ọkwa ọ bụla. N'oge a, e nwere ọtụtụ nyocha njikarịcha njikwa search engine nke a ga-arụkwa iji nweta ọkwa dị elu. Ndị ọkachamara dị elu na-atụ aro na ị ga-agbaso ndụmọdụ ndị edere n'elu ma gaa maka ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụ ezie na SEO na-ewe oge, mgbalị gị ga-akwụ ụgwọ na njedebe.